ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာ Siri ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေ Apple နှင့် Spotify? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာ Siri ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ "Apple နှင့် Spotify?
ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာ Siri ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဆွေးနွေးနေ Apple နှင့် Spotify?
Voice ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်လက်ထောက်အခြေခံ, လုပ်ရပ်တွေကိုအများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သွား. , ငါတို့အသက်ပိုပိုပြီးရိုးရှင်းဖို့ကျနော်တို့ applications များသို့ကပိုနက်ရှိုင်းစွာပေါင်းစည်းရမည်ဖြစ်သည်။ Siri ကိုမကြာမီ Spotify နှင့်အတူလုပျနိုငျသညျ။
တဦးတည်း Alexa သို့မဟုတ် Google လက်ထောက်များကဲ့သို့အသံဖြင့် PDAs ပိုမိုလွယ်ကူစွာ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်တစ်အကြောင်းပြချက်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်လျှင် Siri ကိုအမေဇုံနှင့် Google ကဲ့သို့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့လက်ထောက် Third-party developer များဖွင့်လှစ်ဖို့အမြန်သောကြောင့်ဤသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ Apple ကတူညီသောလမ်းမပေမယ့်ပိုပြီးနှေးကွေးစွာ။ အတိုင်း မကြာသေးခင်ကအစီရင်ခံစာအဆိုပါ Cupertino နှင့် Spotify ဂီတ streaming များလျှောက်လွှာသို့ပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာ Siri ကိုပေါင်းစပ်ဖို့ဆွေးနွေးမှုများအတွက်လက်ရှိဖြစ်ကြသည်။ ဒါက Siri ကိုသင့်ရဲ့ဂီတ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက်နောက်ထပ်မသွားခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒါကသတင်းသတင်းပေးပို့သောသတငျးအခကျြပါပဲ။ Apple နှင့် Spotify Siri ကို voice commands ကိုကနေတဆင့်ပိုမိုအဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှု Spotify ပေးနိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားယခုထင်လိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့်ခေါင်းစဉ်များ, ဖွင့်စာရင်းများကိုနှင့်အယ်လ်ဘမ်များကိုဖတ်ရှုခြင်း, သင်တန်း, ဖော်ပြခဲ့တဲ့လိမ့်မယ်။ Siri ကို၏ပေါင်းစည်းမှုအပြင်, ဤဆွေးနွေးမှုများ Apple ကမှ Spotify ၏သဘောထားပြောင်းလဲသွားနိုင်ပုံရသည်။
iOS အတွက်ပလက်ဖောင်း 13 ကနေ streaming အနေနဲ့အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်ဂီတ?
ဒါဟာကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြား, သဘောတူညီချက်ကယ့်ကိုပြီးပြည့်စုံသောမကပြောသည်ရမည်ဖြစ်သည်။ တချို့အချိန် Apple က Spotify HomePod နှင့် Siri ကိုတွင်အသုံးပြုထားသောခံကနေတားဆီးစွပ်စွဲရှိပါသည်။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်အစီရင်ခံစာယနေ့ပြောပါတယ်သကဲ့သို့, သေံသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားပုံရသည်, ထိုမိန့်ခွန်းအများကြီးလျော့နည်း accusatory ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ခုကုမ္ပဏီကြီးများအကြားကဒီချစ်ကြည်ရေးလုပ်ဖို့ဆဲ ... အ streaming များပလက်ဖောင်း Siri ကိုမှပိုပြီးအဆင့်မြင့် access ကိုပူဇော်သို့မဟုတ် iOS ကို 13 နှင့်အတူမိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်း access ကို Sirikit မူဘောင်သာတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မယ်ရှိမရှိမသိရသေး သင်တစ်ဦး Spotifiy အသုံးပြုသူလျှင်, သင်က iOS 13 ဖို့ကို update လုပ်ဖို့မျှော်လင့်ချင်အံ့သောငှါ ်. ။ ပို. ပင်သင်ကအတူတူ Spotify နဲ့ Siri ကိုအသုံးပြုချင်လျှင်ဒါ။ သည်းခံခြင်း, သည်းခံခြင်း,
တချို့က Apple ထုတ်ကုန်စက်တင်ဘာလကနေ 10% ၏သွင်းကုန်အခွန်ကိုခံယူပါလိမ့်မယ်
သိကောင်းစရာများ: -350 € iMac 5K 27 လက်မအပေါ်
အသစ်က iPad Pro ကိုတစ်ဦးသုံးဆကင်မရာ module ကိုပူဇော်နိုင်
Netflix နဲ့အသစ်ကစီးရီး၏ဖန်တီးမှုဒါဝိဒ် Benioff နှင့်ဒန် Weiss နှင့်အတူပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်
နေ့၏သဘောတူညီမှုရ: ဂိမ်းကစားခြင်းများအတွက်ဂိမ်းကစားကစားအရောင်များကိုအပြည့်အဝကဤမှတ်စုစာအုပ် - Tech မှ - Numerama